IiKhabhinethi zeehenjisi zeeKhabhinethi zabavelisi kunye nababoneleli - China iKhabhinethi yeehenjisi zeehenjisi zeFektri
Umnyango weKhabinethi ngokuThambileyo uvale iihenjisi ezifihliweyo
Umnyango weKhabinethi uthambile ufihlwe ihenjisi eyenziwe ngezinto zealum zinc. Le hinge ihlala isetyenziselwa ucango lwekhabhathi yealuminium. Isinqe esifihliweyo sinyani esahlukileyo ngehenjisi yefenitshala yendabuko. Awuyi kuwubona umzimba wehenjisi kwibhodi esecaleni yekhabhinethi. Yenza ifenitshala yekhabinethi yakho ibonakale kakuhle. Ukuba unomdla kwihenjisi yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Uhlobo lwe-H11 lwaseMelika lwengalo emfutshane yesakhelo sobuso kwihenjisi ye-1/2 ngaphezulu
Intshayelelo:Uhlobo lwe-H11 lwaseMelika lwengalo emfutshane yesakhelo sobuso kwi-1/2 ngaphezulu kwahlala kusetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: H11
I-US2D12 yaseMelika yohlobo lwe-2D hinge
Intshayelelo:I-US2D12 yohlobo lwaseMelika uhlengahlengiso lwe-2D ihinji ihlala isetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: I-US2D12
I-US2D12S 2D Isakhelo sokuSondeza ubuso obufutshane nehenjisi 1/2 ″
Intshayelelo:I-US2D12S 2D Isakhelo sokuSondeza ubuso obufutshane nehenjisi 1/2 / ″ zihlala zisebenzisa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: Ukutshaywa
Isakhelo sobuso esifihliweyo ihenjisi 3/4 ″ yohlobo lwekhabhathi zohlobo lwaseMelika
Intshayelelo:Ifreyim yobuso efihliweyo ihinge 3/4 ″ yohlobo lwekhabhathi zaseMelika zihlala zisebenzisa isakhelo sobuso ikhitshi kunye nekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-US2D114 yohlobo lwaseMelika i-2D hinge yohlengahlengiso
Intshayelelo:I-US2D114 yohlobo lwaseMelika uhlengahlengiso lwe-2D ihenjisi ihlala isetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Uhlengahlengiso lobume be-3D isakhelo sobuso kwihenjisi ye-1 intshi yokugubungela ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese
Intshayelelo:I-3D yohlengahlengiso lwesakhelo sobuso kwihenjisi ye-intshi e-1 yokugubungela ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese, ngaphandle kokuvala okuthambileyo, ukugoba okungu-1, intsimbi ebunjiweyo, i-nickel. Kunye 45mm ipateni isikrufu umngxuma, iqhosha lemenyu manual kwi isicelo. Uhlengahlengiso lweCam kunye neethebhu ezi-4 zokubekwa ngokulula kumda wesakhelo sobuso. Iphakheji esemgangathweni nganye ngaphandle kwezikrufu, ukupakisha okuninzi ebhokisini.
Umzekelo No .: I-US3D1
Uhlobo lwe-US3D1S lwaseMelika uhlengahlengiso lwe-3D kwihenjisi eqhelekileyo
Intshayelelo:I-US3D1S yohlobo lwaseMelika uhlengahlengiso lwe-3D kwihenjisi eqhelekileyo isetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: I-US3D1S
I-3D umnyango olungelelanisiweyo wehenjisi yobuso bekhabhathi 1/2 ″
Intshayelelo:Ihenjisi yomnyango ehlengahlengisiweyo ye-3D yesakhelo sobuso kwikhabhathi ye-1/2 ”ihlala isetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: US3D12
1/2, fracturing ethambileyo kufutshane 3D ubuso ekhitshini isakhelo ebusweni ikhabethe ucango lomnyango
Intshayelelo:I-1/2, i-Hydraulic ethambileyo yokuvala ubuso bekhitshi yomnyango wekhitshi yehenjisi ihlala isetyenziselwa isakhelo sobuso ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: I-US3D12S
I-1-1 / 2, ucango lweHydraulic olusondeleyo kwihenjisi yobuso besakhiwo sasekhitshini kunye neekhabhathi zangasese
Intshayelelo:I-1-1 / 2, ucango lweHydraulic olusondeleyo kwihenjisi ngobuso ekhitshini kunye neekhabhathi zangasese zihlala zisebenzisa isakhelo sobuso ekhitshini kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
1-1 / 4, Ukuwaleka ngaphezulu kwe-105 Degree 2 Cam Cinezela kwihenjisi yobuso beKhabhinethi
Intshayelelo:1-1 / 4, Ukuwaleka ngaphezulu kwe-105 Degree 2 Cam Cofa kwisakhelo sobuso IKhabhinethi yehenjisi ihlala isetyenziselwa ubuso besakhelo ekhitshini kunye neekhabhathi zangasese. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.